Tyler ekhululiwe endlini kulo muzi omaphakathi, kwenziwe nge probation! - UKUSEKELWA KEVIN & Tyler
A year ago, Tyler Lang was sentenced to three months time served, izinyanga eziyisithupha ekhaya begqunywe ejele, six months in a halfway house, and a year of supervised release, along with restitution. Namuhla, yena wadedelwa endlini kulo muzi omaphakathi kanye term yakhe ukukhululwa ogadiwe yaphela!
Tyler ugwetshwe ngaphansi kwe-Animal Enterprise Terrorism Act yokukhulula 2,000 mink ovela noboya epulazini futhi spray-Umdwebo "Liberation is Love" on the side of a engotsheni nge codefendant yakhe Kevin Johnson. Leli pulazi noboya livalwa ngenxa wezenzo zazo — saving izizukulwane izilwane ekubeni ahlushwe futhi abulawe khona.
Tyler iye esalindele ngokulangazela okukhulu lolu suku futhi yavusa ukuba siqhubekele nokuphila kwakhe. Akeve ebonga bonke ukusekelwa abantu baye babonisa kuye futhi Kevin kusukela beboshwa — ngakho siyabonga ukuba wonke umuntu wambhalela, umnikelo, basakaze ukuqwashisa ngendaba zabo, futhi waphenduka i amasamanisi Aeta ibe nesikhathi sokubonisa womfelandawonye.
Celebrate lamuhla Tyler, futhi ibuye zinike isikhathi sokuhlolisisa ukwesekwa abantu abenza basaboshiwe kanye nokusebenzela izilwane abasezabelweni ezinkanjini.
← Isitatimende kusuka Kevin,en